अमेरिकाको नागरिकता लिन चाहनेले जान्नैपर्ने प्रश्न (प्रश्न १) « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकाको सर्बोच्च कानुन के हो ?
युएससीआईएसमा अमेरिकी नागरिकताको निवेदन फाइल गर्दा र गरिसकेपछि अन्तरवार्ताको दिनमा जाँदा आवेदकहरुले निश्चित कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यीनै ध्यानदिनुपर्ने विषयमा न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीलृ दिनुभएको छ १० टिप्सहरु । यी टिप्सहरु सामान्य सुझावहरु हुन् कानुनी सल्लाहहरु होइनन् । कानुनी सल्लाहको लागि तपाईले जीसीलाई उहाँको कानुनी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
अमेरिकी संसदका दुई सदनहरु के के हुन् ? सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स अमेरिकी संसदमा